गाडी एसेम्बली गर्ने उद्योग : २० ओटा दर्ता, सञ्‍चालनमा एउटा मात्र | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर गाडी एसेम्बली गर्ने उद्योग : २० ओटा दर्ता, सञ्‍चालनमा एउटा मात्र
on: १७ बैशाख २०७६, मंगलवार ११:०० मुख्य खबर, यातायात, समाचार
गाडी एसेम्बली गर्ने उद्योग : २० ओटा दर्ता, सञ्‍चालनमा एउटा मात्र
काठमाडौं । नेपालमा भेहिकल एसेम्बल गर्न दर्ता भएका उद्योग २० पुगेका छन् । नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नेपालमा चारपांग्रे सवारी एसेम्बलका लागि लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन प्रालि दर्ता गरेसँगै उक्त संख्या २० पुगेको हो ।
लक्ष्मीले रू. ५ अर्ब १० करोड लगानीमा मोटर एसेम्बल उद्योग सञ्चालनका लागि वैशाख ८ गते उद्योग विभागमा दर्ता गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–६ मा रहने उक्त उद्योगले वार्षिक ८ हजार भेहिकल एसेम्बल गर्ने उल्लेख छ । शतप्रतिशत नेपाली लगानीको यो कम्पनीमा ४४० जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । दर्ता भएका उद्योगमध्ये नौ ओटा नेपाली लगानीमा, आठओटा विदेशी लगानीमा र चारओटा नेपाली–विदेशी संयुक्त लगानीको रहेको विभागले बताएको छ ।
केही समयअघि मात्र कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । गत चैत १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा लगानी बोर्डले मोट्रेक्सको लगानी स्वीकृत गरे पनि अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
उक्त कम्पनीले भन्सार छूट, आयकर छूट, ७ वर्षसम्म एसेम्बलमा एकाधिकार लगायत शर्त राखेपछि नाडाका पदाधिकारी यस्तो शर्त स्वीकार नगर्न मागसहित लगानी बोर्ड पुगेका थिए । नाडाका सदस्य करण चौधरीका अनुसार बोर्डले बजारमा एकाधिकार जस्ता कुनै पनि शर्त स्वीकार नगर्ने आश्वासन दिएको छ । बोर्डले मोट्रेक्सको लगानी स्वीकृत गरे पनि यो कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भइसकेको भने छैन । मोट्रेक्सको लगानी स्वीकृत भएसँगै नेपाली कम्पनी एसेम्बलमा लगानी गर्न थप इच्छुक देखिएका छन् । राज्यले प्रोत्साहन गरे आफूहरू यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न तयार भएको चौधरीले बताए ।
दर्ता संख्या २० पुगिसक्दा हाल नियमित एसेम्बल भने हुलास अटोले मात्रै गरिरहेको छ । गोल्छा अर्गनाइजेशनका शेखर गोल्छाका अनुसार कम्पनीले नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–११ स्थित उद्योगमा बजाज डिस्कभर १२५ मोटरसाइकलको एसेम्बल गरिरहेको हो ।
नेपालमा सर्वप्रथम होङ्ग्फा मोटरसाइकल एसेम्बल कम्पनीले रू. २ करोड ५० लाख लगानीमा वार्षिक ३ हजार मोटरसाइकल एसेम्बल गर्नेगरी उद्योग दर्ता गरेको पाइएको छ ।
केही समय अघिसम्म चिनियाँ विद्युतीय स्कुटर बेनलिन र बेल्लाले चीनबाट पार्टपुर्जा ल्याएर एसेम्बल गरिरहे तापनि हाल यी उद्योग नियमित सञ्चालनमा छैनन् ।
दर्ता भए पनि किन सञ्चालन हुँदैन उद्योग ?
नेपालमा भेहिकल एसेम्बल गर्न केही कम्पनी दर्ता भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । हुलास मोटर्सले नेपालमै एसेम्बल गरेर मुस्ताङ गाडीको उत्पादन गर्दै आएकोमा हाल सो बन्द भइसकेको छ । नाडाका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल नीतिगत उल्झन र पूर्वाधार अभावका कारण यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘हाल सरकारले विद्युतीय भेहिकल उत्पादनमा जोड दिने भने तापनि सोअनुसार नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भन्सार लगायतमा छूट दिएर आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण भए नेपालमा गाडी बनाउन उद्योगी तयार छन् ।’
इलेक्ट्रिक भेहिकल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पनि सरकारबाट उद्योगीलाई प्रोत्साहन नभएको धारणा राखे । ‘विद्युतीय गाडी आयात गर्दा ८ प्रतिशत भन्सार लाग्छ, तर नेपालमै गाडी बनाउँछु भन्दा ब्याट्री लगायत पार्टसमै ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ,’ उनले भने, ‘जब बनाउन भन्दा आयात गर्नमै फाइदा हुन्छ भने कोही किन बर्बाद हुन चाहन्छ ?’